Shiinaha Excavator Haydarooliga dhululubada warshad iyo soo saarayaasha | Xinrun
Taxane 1.Excavator oo laba jibaaraya hal baaldi oo ah hawo-shidaal hidde ah ayaa loo isticmaalaa sida isu-soo-celinta dhaq-dhaqaaqa toosan ee dhaq-dhaqaaqa nidaamka hawo-qodista. Taxanaha kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka waa nooc ka mid ah waxsoosaarka hawo-qaboojiye ee si gaar ah loo baaray loona soo saaray Komatsu iyo Kayaba tiknoolajiyadda Japan. Waxay leedahay astaamaha cadaadiska shaqada ee sarreeya, waxqabadka lagu kalsoonaan karo, rakibidda habboon iyo kala-goynta, dayactirka fudud iyo qalabka wax lagu keydiyo. Dhammaan shaabadaha silsiladdan silsiladda korontada ku shaqeysa waa shaabado la soo dejiyey. Dusha sare ee budada bistooladdu way adagtahay oo waxaa lagu dhejiyay chromium adag, qallafsanaanta ka dib marka la nadiifiyo waxay gaari kartaa Ra0.08, Tikniyoolajiyadda Kayaba ee madaxa nuugaysa ayaa si khaas ah loo horumariyey iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada qodista. Maaddadu waa bir bir ah, oo labada geesoodna waxaa ku buufinaya keyd sabayn ah. Waxay leedahay waxqabadka barkinta wanaagsan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qotomisyada PC-ga ee qotoma ee qotodheer iyo qodobo kale oo haydaroolli ah oo lagu soo saaro gudaha iyo dibedda.
2. Astaamaha naqshadeynta dhululubo dhululubo ah:
A. Usha bistooladdu waxay ka samaysan tahay bir saxan oo xoog badan oo bir ah. Dusha sare ee usha piston-ka waxaa lagu demiyey dhexdhexaad dhexdhexaad ah ilaa adkaanta ugu badan ee HRC62. Dusha sare ee bistoolada waxaa lagu xardhay qoraal adag oo la safeeyay si loo siiyo dusha sare ee u adkeysiga si looga hortago in bistooladdu jiido oo ay garaacdo, Nolosha dheeriga ah ee shaabaddu waxay leedahay qodob nabadgelyo ah oo ugu yaraan 5 jeer awoodda xoogga leh ee cadaadiska lagu qiimeeyo qaybta ugu yar ee iskutallaabta usha bistoolada iyo bistoolada.
B. Gacanta hagaha wuxuu ka sameysan yahay bir ductile sida ku cad goobta qodista. Waxay ka samaysan tahay bir bir ah oo qanjir ah oo leh adkeysi badan oo duug ah. Waxay ku qalabeysan tahay boodbood sita oo laga keenay Japan. Cadaadiska ugu badan ee xambaarsan culeyska waa 270n / mm2, culeyska firfircoon waa 140n / mm2, xawaaraha ugu badan waa 5m / s, isuduwaha isku dhaca waa 0.02 ~ 0.07, heerkulka shaqada waa - 200 ° C ilaa 280 ° C, iyo aagga hagista wuxuu yareynayaa culeyska illaa ugu badnaan u adkeysan kara culeyska dambe ee ballaaran, Kordhi nolosha labada silsilad iyo shaabadba.
C. Khatimidii usha bistooladdu waxay ka kooban tahay giraanta boodhka, giraanta shaabadda dhejiska iyo haydleeliyaha, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara daadashada saliidda hidda ee bistoolada. Giraanta siigadu waa giraan laba-laab ah oo caddeynaysa boodh. Shaqadeedu waa inay ka hortagto in siigada, wasakhda, ciidda iyo birta birta ahi soo galaan. Waxay si weyn uga hortagtaa xoqida, waxay ilaalisaa walxaha hagaha waxayna dheereysaa nolosha adeegga shaabadda. Dibnaha daboolida dhexdhexaadka ahi wuxuu yaraynayaa filimka saliidda hadhay. Qalabka polyurethane wuxuu hubiyaa sifooyinka wanaagsan ee isku dhaca qalalan wuxuuna kordhiyaa iska caabbinta, Sababtoo ah iska caabinta wanaagsan ee ozone iyo shucaaca ay keeneen xaaladaha cimilada, nolosha adeegga waa la dheeraaday. Heerkulka shaqadu waa laga bilaabo - 35 ° C illaa 100 ° C, xawaaraha dushiisuna wuu ka yar yahay 2 m / s. Giraanta weyn ee wax lagu xidho ee loo yaqaan 'piston rod' waa shaabadda nooca bushimaha leh oo leh laba bushimahood oo wax lagu xidho iyo isku dhejis adag oo dhexroorka dibadda ah. Sababtoo ah saliid dheeri ah oo udhaxeysa labada bushimood, waxay si weyn uga hortageysaa isku dhaca qallalan iyo xirashada, waxay iska caabineysaa saameynta iyo xoqida, waxayna hagaajineysaa waxqabadka xiritaanka cadaadiska eber. Cadaadiska shaqadu waa 40MPa, heerkulka shaqadu waa - 35 ilaa 110 ℃, xawaaraha dusha sarena wuu ka yar yahay 0.5m / s. Shaqada kaydka hidda-shidaalka ayaa ah inuu dhuuqo saameynta iyo isbedbeddelka cadaadiska culeyska sarreeya, go'doomiyo dheecaanka heerkulka sare, iyo hagaajinta adkeysiga shaabadaha. Cadaadiska ugu sareeya wuxuu gaari karaa 100MPa. Sababtoo ah qaabka jeexjeexan ee qaabka gaarka ah ee bushimaha is riixaya oo sii deyn kara cadaadiska, waxay baabiin kartaa cadaadiska u dhexeeya giraanta wax lagu xiro iyo keydka usha gogosha la dhaqaajin karo, waxayna u wareejisaa cadaadiska ka dhexeeya inta udhaxeysa shaabadda weyn iyo keydka keydka dib. nidaamka.
D. Boorsada dhululubadu waxay ka samaysan tahay aluminium 27SiMn ah oo leh awood sare, qaab yar iyo miisaan fudud, la huwiyay laguna rogay meel sare oo dusha sare ah, si loo yareeyo khilaafaadka gudaha loona dheereeyo nolosha adeegga shaabadda.
E. Bistoolada caadiga ah waa shubis leh laba isku xirnaanta oo ku habboon usha bistoolada. Bistooladda si adag ayaa loogu xirayaa xarigga u dhexeeya lowska iyo lowska bistoolada, si loo hubiyo shaqada la isku halleyn karo ee cadaadiska sare iyo qeybaha. Dhammaan shaabadaha bistooladaha ayaa la soo dejiyaa alaabada Parker iyo NOK. Labada daraf ee pistonka waxaa lagu rakibay giraan wasakh ah oo dhumucdiisu dhan tahay 4 mm oo ka samaysan PTFE. Maaddaama ay leedahay shaqeynta qulqulka wasakhda, saliidda waa laga hortagi karaa inuu waxyeello u geysto isku-darka walxaha dibadda, si loo hubiyo in shaabaddu ay leedahay nolol adeeg dheer oo ay ka ciyaari karto door hagitaan iyo taageero ah. Giraanta taageertaa waxay leedahay awood cadaadis sare oo sita, taas oo baabiin karta dhammaan birta xiriirinta birta u dhexeysa bistoolada iyo silsiladda, waxay siisaa awood saa'id ah oo dhinaca dambe ah, saameyn ku yeelata, kor u qaadka aagga xiriirka iyo iska ilaali xoqida xoqida. Shaabadda piston wuxuu qaataa nooca furan ee Pak shaabadda OK, oo leh faa'iidooyinka iska caabbida culeyska saameynta, iska caabinta khilaafaadka hooseeya iyo rakibidda fudud. Sababtoo ah waxqabadka gaarka ah ee giraanta shaabadda, waxay leedahay awood xoog leh oo ka hortag ah oo ka soo horjeeda cadaadiska sare iyo nadiifinta ballaaran, iyo cadaadiska shaqada ayaa u sarreeya sida 50MPa.
F. Gacanta guntin ee leh saabka usha waa gacmo dhexe, oo si toos ah u hagaajin kara isku-xirnaanta, iyo sababtoo ah farqi weyn ayaa u dhexeeya gacanka keydka iyo bistoolada, cadaadiska bilowga waa la yareyn karaa. Qalabka wax lagu keydiyo ayaa kobcaya xaddiga kubbadda birta ah, oo sabayn kara. Gacanta keydka ah iyo isku-xirku wuxuu leeyahay astaamo sabayn. Sidaa darteed, waxay yeelan kartaa farqiga u yar ee keydka, si otomaatig ah u waafaji bartamaha oo baabi'i kara saameynta qaladka usheeda dhexe ee coaxial. Waxqabadka keydku waa fiican yahay, taas oo yareyn karta buuqa iyo culeyska saameynta oo dheereyn kara adeegga mashiinka.
Xiga: HSG01-E Taxanaha Qalabka Hydraulic
Silsiladda korontada ku shaqeysa
Noocyada Silsiladda Haydarooliga
Dhululubada yar yar
Alxanka Haydarooliga Alxanka